Dhageyso: Weerarkii lagu qaaday guriga Axmed Daaci oo la baarayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: R/wasaaraha Soomaaliya, C/weli Sheekh Axmed Maxamed ayaa shaaciyey in xukuumaddu baareyso qaabkii uu u dhacay weerarkii Jimcihii lasoo dhaafay ciidamada Nabadsugidda iyo AMISOM ku qaadeen guriga gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir, Axmed Xasan Cadow (Daaci).
R/wasaar C/weli ayaa xusay in xukuumaddu arrintaas guddi u xilsaartay, ayna soo gudbin doonto warbixin la xiriirta sidii wax u dhaceen iyo sidii howlgalkaas loo wajahay.
“Baaritaan ayaa lagu sameynayaa sidii howlgalkaas u dhacay iyo la qaban karay ee aan la qaban, waxaana soo gudbin doonaa warbixin buuxda” ayuu R/wasaare C/weli Sheekh oo Muqdisho kula hadlay warbaahinta.
Halkaan ka dhegeyso codka R/wasaare C/weli Sheekh
Xildhibaano iyo odayaal kazoo jeeda beelaha Muqdisho ayaa si kulul u dhaliilay qaabka loo maareeyey howlgalkii lagu qaaday guriga Axmed Daaci.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa horay shacabka ugu balanqaaday iney baareyso dhacdooyin horay u dhacay, hase ahaatee ma jirto hal dhacdo oo warbixin xukuumaddu kazoo saartay.